Igwe ihe ngwuputa 65mm 8gpu kacha ewu ewu
1. The ethereum ikpe na-eji B85 isi akara chipset, PCIE ala, nnukwu bandwit, na ike ndakọrịta.
2. Rig Miner nwere ihe nkwụnye ọkụ arụnyere na motherboard agbakwunyere.Ime ime dị ọcha ma dị mma, nwere ahịrị ole na ole na eriri ikuku na-enweghị mgbochi.
4. A na-akwado kaadị ndị na-egwupụta ihe nke ọma n'ebe dị iche iche iji belata ibu nke motherboard, belata ihe ize ndụ nke mmebi motherboard, ma mee ka kaadị eserese na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ogologo ndụ.
5. Mine rig single channel 4 onye na-agba ọsọ ọsọ maka ikpo ọkụ ọkụ, ndụ ọrụ bụ 50,000 awa, na ike oriri dị ka 6W.
6. 8 kaadị miner 65mm ndịna-emeputa kaadị oghere oghere, dabara maka ọtụtụ ndịna-emeputa kaadị na ahịa.
7. A na-eme mpụta mpụta nke chassis nke Ngwuputa nke igwe oyi na-ekpo ọkụ na-eji akwa 1mm.
2. Igwe a nwere naanị 4 Fans, ma achọrọ m Fans 8, enwere m ike?
Ee, ọ bụrụhaala na ị nwere ihe a chọrọ, anyị nwere ike ịwụnye Fans 8 maka gị, mana ọnụahịa ahụ ga-adị iche, ị nwere ike ịmekọrịta na ndị ọrụ anyị.
Anyị na-etinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ire ngwaahịa ndị metụtara blockchain Mining Machine maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 6, ma nwee ahụmịhe mmepụta ihe na ahụmịhe ahịa.Maka igwe na-egwuputa ihe blockchain, anyị nwere ikike ọkọnọ siri ike.Tụkwasị na nke a, anyị eguzobewo otu ọkachamara mgbe-ahịa na-ere ahịa na ndị ahịa mba ọzọ iji hụ na onye ahịa ọ bụla nwere ike nweta ahụmahụ ịzụ ahịa kacha mma.
Nke gara aga: Ndị na-egwupụta ụlọ igwe IDC dị elu nwere ọkwa nke 50mm
Osote: Ngụkọta akụ na ụba 55mm pitch gpu mining chassis
Motherboard Ejikọtara / 8 kaadị / PCIE / oghere 65mm
Nha chassis 700mm(L)*400mm(W)*170mm(H)